Nhau - Chamber of Commerce Makwikwi Mibairo
13TH, Gumiguru 2020
Mhemberero yekuvhura yun Baituan Hondo muna2020 yakatangwa muna Nyamavhuvhu 15. Kambani yakaita chirongwa chakajeka chehondo iyi, uye munhu wese akashanda pamwechete uye akashanda nguva yekuwedzera kuhwina rukudzo kukambani. zvakare gadzira mibairo.
Munguva yehondo yekamuri yeCommerce Corps, zvitunha zvedu "kutinhira zvitunha" bhizinesi rega rega bhosi rinosangana pamwechete kupa mazano uye kuronga, tinodzidza kubva kune mumwe nemumwe kuzvisimbisa. Ivo vaviri shefu nevashandi vakaisa simba ravo rese mukurwa
Pamhemberero yemubairo, zvirongwa zvakasiyana zvakagadzirirwa neLegion, manejimendi kugoverana kweLeague Committee yeLegion inokunda, uye chirongwa chinofambidzana chemubvunzo weruzivo uye kupindura zvese zvinoita kuti mibairo ive yakajeka, inoshamisa uye inonakidza. Kugovana kwevaridzi vemabhizinesi, ngatizivei kuvapo kwemakakatanwa, mune manejimendi uye ruzivo rwehunyanzvi vane mukana wekuvandudza. Iyo chirongwa chakarongedzwa neChamber of Commerce chakaita edu eHebei emabhizimusi ekunze mabhizinesi awedzere kubatana。
Kambani yedu inopfupikisa makwikwi aya, inotora pane simba revamwe uye inoderedza musiyano. Mumwedzi mishoma inotevera, isu tichasimbisa timu yedu yebhizinesi uye nekuvandudza mamodheru ekutungamira. Mhuri yekambani yedu ichatora nyowani. Iyo yepamusoro nhanho yehunyanzvi hunyanzvi kusangana neiyo nyowani zana yeLigi Hondo.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvedu, taura nesu kuti ubatane nesu. Isu takagadzirira kubatana maoko nevanoshuvira vechidiki kuti vagadzire yepasi rose yekutengesa modhi uye nekuona kukosha kwekambani uye nevanhu vamwe. Isu tinovimba kuti pasi pekutungamira kwezviroto zvedu, isu tichazadzisa kukunda kwevatengi vedu, makambani nevashandi!